အိုဘယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Buddhism » အိုဘယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်	25
အိုဘယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်
Posted by Thint Aye Yeik on Mar 24, 2016 in Buddhism, Critic, History, My Dear Diary | 25 comments
မယုံမရှိနဲ့ဗျို့. . .
မနေ့(တပေါင်းလပြည့်နေ့)က မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုက ကျုပ်ဖြင့်
ကိုယ့်မျက်စိတောင် ကိုယ် မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ။
ဒါမဲ့ တကယ်ရေးချ တကယ်ကြီးဗျ။
ဆူးလေဘုရားလမ်းနဲ့ ကုန်သည်လမ်းထောင့်(ဗန္ဓုလပန်းခြံဘေး)မှာ. . .
ကားကလေးရပ်ပြီး ဗေဒင်ဟောစားတဲ့သူတစ်ယောက် ရှိနေတာ တွေ့ဖူးမပေါ့. . .
အေးးး မနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက အဲ့ဗေဒင်ဆရာရှေ့မှာ
ကျုံ့ကျုံ့လေး ထိုင်-လက်ဝါးလေးဖြန့်ပြပေးထားပြီး
ထိုင် နားထောင်မှတ်သားနေတာ. . .
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဗျ. . .
(တိန် တိန် ၂ခါတိန်)
အဲ့ ကိုယ်တော်- သက်တော်ကတော့ သုံးဆယ်ကျော်ပဲ ရှိမယ်ထင်ပါ့။
သို့ဂလို သို့ဂလို . . .
ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ဗေဒင်မေးနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်ပြီး ကျုပ်ဖြင့် အတော် ကြေကွဲသွားသဗျို့. . .
ကျုပ်ကလေးခမျာ ဘုန်းကြီးကိုပဲ ပြေး ဦးချရတော့မလိုလို. . .
ဘုန်းကြီးရှေ့မှာ မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်နေတဲ့ ဗေဒင်ဆရာကြီးပဲ ပြေး ဦးချရတော့မလိုလိုကို ဖြစ်လို့။
အိုးးးးဘယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်. . .
အဲ့ဒီ မြင်ကွင်းကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာ. . .
ပတ်တနာအရှာခံရမှာစိုးလို့ မရိုက်ခဲ့ရဘူး။ ဒီတော့ အနှီမြင်ကွင်းတော်ကြီးအား. . .
ဤခေါင်းတော်ကြီးနဲ့ဤမျက်စိတော်ကြီး သုံးကာ လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လုပ်၍ စိတ်မှတ်တမ်းတော် တင်ရင်း. . .
ပလို့တွေတော့ ဂျိကုန်ပြီလို့ တွေးတော်မူမိသည့်အပြင် ယခုပိုစ့်တော်ကိုပါ လက်တော်ဖြင့် . . .
ရေး တင်တော်မူလိုက်ရလေတော့. . .သတည်း. . .
သာာာာာာာာဓု. . .
သာာာာာာာဓု . . .
သာာာာာာဓု. . .
ခင်ဇော် says: အမျှ
Thint Aye Yeik says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ကျောင်းပြီးခဏ၀တ်တဲ့ကိုယ်တော်နေမှာပါ
Thint Aye Yeik says: .ကျောင်းသားအရွယ်တော့ မုန့်ဗူးနောာာာာာာ
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒုလ္လဘ ခဏဝတ်တာဖြစ်မှာပေါ့..
ပြန်ထွက်ရင် မိန်းမရမရ မေးတာ ဖြစ်မယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
Thint Aye Yeik says: အိုက်တော့ နာတို့က ဘု ကြည်ညိုပြီး ဂေါ့ရမဲ
Kaung Kin Pyar says: အဟွတ်.. ဘုန်းကြီးတွေ အနေအထိုင် တတ်ကြစေလို….
ငယ်ဖြူဖြစ်ဖြစ်၊ ဒုလ္လဘဖြစ်ဖြစ်.. သင်္ကန်းကို အားနာသင့်….
Thint Aye Yeik says: အဲ့ဒါ ပြောတာလေ. . .
သင်္ကန်းဝတ်ထားရင် ကန်တော့ရမယ်ဆိုတဲ့ အနန္တငါးပါးထဲလည်း ဝင်ထားသေး
လမ်းဘေး ဗေဒင်ဆရာရှေ့မှာလည်း ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်ပြီး ယုံကြည်အားကိုးနေသေး။
(ဒါတောင် ဘုရားက ဗေဒင်ကို ယုံကြလို့ မဟောခဲ့သေးလို့။)
Kaung Kin Pyar says: ဘုန်းကြီးအလုပ် ဘုန်းကြီးမလုပ်နိုင်ရင် ဘုန်းကြီးမလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ…
သင်္ကန်းကြီး ကာထားတော့ ပစ်မှားရမှာလဲ ကိုးလို့ကန့်လန့်ကြီး…. ခွီးးးးးးးးးးးးးး
Thint Aye Yeik says: ဒါတောင် ငွေတိုးချေး စားတဲ့ ဘုန်းကြီးတို့. . .
အပေါင်ခံစားတဲ့ ဘုန်းကြီးတို့. ..
တိုက်ခန်းထဲ ဒကာမ ခေါ်ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ ရှိကြောင်း မပြောသေးဘူး
လုံမလေးမွန်မွန် says: ချဲဒိုင်ကိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးရော မြင်ဖူးလား.. ဟိဟိ..
ပြီးရင် အမျိုးဘာသာအော်တာ ထိပ်ဆုံးက…
kai says: ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အချိန်လောက်ကများ.. ဒီထက်အများကြီးဆိုးလောက်တယ်…။
ဟိန္ဒူဗြဟ္မာဏကအခြေခိုင်ရှိပြီးဆိုတော့.. ဗုဒ္ဓမဖြစ်ခင်.. သိဒ္ဓတမင်းသားဘ၀မှာကို.. အဲဒီဝေဒပုရာမ်ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီမှာ.. မင်းသားက.. သူတို့ကိုဆရာတင်.. တပည့်ခံဖူးတာပေါ့…။
အဲဒါ…ခေတ်တွေပြောင်း.. တပါတ်လည်တော့.. ဟိန္ဒူဗြဟ္မာဏ၀ါဒက… ထေရာဝါဒထဲရောသမမွှေပြီးနေပြီပဲ..။
၀ါဒမခိုင်တဲ့.. ဟိုက်ဘရစ်ဝါဒမို့.. မထူးဆန်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
Thint Aye Yeik says: ဆိုတော့ ဝါဒ ခိုင်ဖို့ ယတြာကောင်းကောင်း လိုမယ်ထင့်
သူကြီးရဲ့ အင်းတွေနဲ့ စီရင်ရမယ်ထင့်
kai says: ၀ါဒခိုင်ရင်ကျ.. အင်းအိုင်စမ လက်ဖွဲ့.. အ၀ါရောင်ဝတ်ရုံတွေဆိုတာ… လုပ်စားဖို့ဟာတွေလို့ပဲ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဝါဒ မခိုင်​တာ​တော့ ဟုတ်​ပုံမရ လူ​တွေရဲ့စိတ်​က မခိုင်​တာဘဲဖြစ်​မယ်​ဗျ ။ အဓိက က​တော့ မြန်​မာလူမျိုး​တွေရဲ့စိတ်​ထဲမှာကို ဗုဒ္ဓဝါဒက စူးစူးနစ်​နစ်​ မ​ရောက်​​သေးတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: အဲဒီမူရင်း မြန်မာထေရာဝါဒဆိုတာကိုက.. ဗုဒ္ဓ၀ါဒမှမဟုတ်ပါဘူးလို့.. နာမယ်ကြီးနဲ့ကိုကဆိုထားပါတယ်ဆို… ကိုရင်က.. လူတွေစိတ်မခိုင်လုပ်နေသေး…။
စိတ်ခိုင်လို့ရအောင်.. မှန်မမှန်.. သေချာမသေချာ.. ပြန်စိစစ်မေးခွင့်ပြုထားတာတောင်မဟုတ်..။
ထေရ တောင်မဟုတ်.. ထေရာ..
ထေရ လို့သုံးရင်.. ထေရီတွေပါနေဦးမယ်…
၀ါဒ.. ခံယူချက်.. ယုံကြည်ချက်..။
ထေရာဝါဒ….။ ဘုန်းကြီးများ၏ခံယူချက်။ ယုံကြည်ချက်။
ဘုန်းကြီးဝါဒ… ။ ဘုန်းကြီးတွေက ပြောသမျှ ၀ါဒ…။
တပါးတမျိုး.. တယောက်တဖုံ… ပြောသမျှယုံကြ..။ ထေရာဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ.. ။ ဗုဒ္ဓသာသနာကို.. ဘုန်းကြီးများယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်အတိုင်း ပြောသမျှလက်ခံလိုက်နာကြရမည့် သာသနာ။
.. ဟုတ်ပြီလား..။ =
ထေရ၀ါဒ ဟုသော အသုံးအနှုံးသည် သက်ကြီးဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ (ထေရ) လျှောက်သောလမ်း ဟု သဒ္ဒါအလိုအရ အဓိပ္ပာယ် ရပေသည်။
Thint Aye Yeik says: ဒီသူကြီး . . .
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: လက္ခဏာ ဆြာက ပေါဒယ်မေရယ်
ဘုန်းလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေဒယ်…ငိငိ.. :D
Thint Aye Yeik says: ဘုန်းကြီးလမ်းမှာ. . .တုံး ခံနေတယ်. . .
Tawwin Pan says: အဲဒီလပြည့်နေ့ပဲ…..လိုင်းကားပေါ်မှာ ယောဂီဝတ်နဲ့ အစ်မကြီးက ရှေ့ကတက်လို့
နောက်က အစ်မတစ်ယောက်ကလည်း ကားပေါ်လှမ်းတက်လိုက်တာ ဖိနပ်တက်နင်းလို့ဆိုပြီး
ယောဂီဝတ်အစ်မကြီးက နောက်ပြန်လှည့်ပြီး တဖက်ဖက်နဲ့လှမ်းရိုက်နေတာ မြင်လိုက်ရ။
အရိုက်ခံရတဲ့အစ်မကြီးက သိပ်မစွာလို့ရယ်။ နို့မို့ဆိုရင် ပွဲက ကြည့်ကောင်းပီ။
ယောဂီဝတ်ရုံသာဝတ်ပြီး သည်းခံစိတ်လေး တစက်မှမရှိဘူးရယ်။
Thint Aye Yeik says: ဟန်ပြယောဂီတွေလည်း ရှိပါ့
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သင်္ကန်းအပေါ် လှည့်စားချက်များပါတယ်။ ဒါဝတ်ရင်ပဲ ဒီလူက ဒီလူ ဆိုတဲ့အသိ ပျောက်သွားစေအောင် ရေးခဲ့သားခဲ့ကြတဲ့ စာတွေ၊ ဟောခဲ့ပြောခဲ့ကြတာတွေ နည်းမှ မနည်းဘဲ။ ၀တ်ရုံပြောင်းသွားတယ်။ အထဲကလူက သာမန်ပဲ ဆိုတာ ကို ပြောမှ မပြောကြတာ။ ပုထုဇဉ်လို့ပဲ ပြောကြတယ်။ ပုထုဇဉ်တော့ ပုထုဇဉ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အသုံးအနှုန်းရဲ့ ကွာဟချက် အဲဒါလေး
Thint Aye Yeik says: သင်္ကန်းဝတ်တော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တွေ စောင့်ထိန်းရမယ့် တာဝန်ကို ယူရဲ ခံရဲ ထိန်းရဲမှ ဝတ်စေချင်တာ
ဦးကြောင်ကြီး says: ဗေဒင်ဝေဒကို ဘုန်းကြီးတွေ ငယ်စဉ်ကိုရင်ဘွ သင်အံကျက်မှတ်တာ အစဉ်အလာမို့ ဖျက်ရခက်သားလား။ ပညာတခုရယ်လို့ မြင်ရင် သိပ်ပြသနာ မရှိပေါင်။ မအပ်စပ်တာတော့ မအပ်ဖူးပေါ့…။ အဲလိုပြောဂျေးစို သဂျီးဇုတ် ခင်မြှားဂေါ မိန်းမနဲ့ ခလေးနဲ့ လာဘ်ဗီးစ်ဂက် ခုနှစ်လွှာခြွတ်ရှိုး မသွားဘဲ နေနိုင်သလား။ မွပ်ထီး..
Thint Aye Yeik says: .ဦကြောင်နဲ့ သူကြီး အဲ့ ၇လွှာချွတ်ရှိုးပွဲမှာ ခီဏခီဏ ဆုံမှာပဲနော်
အဲ့ခါကျရင် တီယောက်ကိုတီယောက် မိသင်းခြင်နောင် ထောင်နေကြတာပဲလား